Yintoni i-HDMI eza nayo kuthi? | I-Huachuang Elektroniki
Phantse izixhobo ezibhiliyoni ezisibhozo ezenziwe ngetekhnoloji ye-HDMI yathunyelwa ukusukela ukukhutshwa okokuqala kwe-HDMI ngo-Okthobha ka-2002. Isicaciso seHDMI 2.1 sakhutshwa ngo-Novemba ka-2017 siyaqhubeka nokwenza ukuphuculwa kwamacandelo emveliso amatsha kunye nezisombululo zokuhlangabezana neemfuno ezikhulayo zomsebenzi ophezulu kunye namava ngakumbi abathengi.
Itekhnoloji ye-HDMI iyaqhubeka njengevidiyo ekhokelayo yedijithali, iaudio kunye nedatha eyidibanisayo ye-Ultra high-definition shows kuluhlu olubanzi lwezinto zombane zabathengi, i-PC, iselfowuni, iimoto kunye nezixhobo ze-AV. Ikwande kwizisombululo ezivumela amashishini anje ngenkathalo yezempilo, emkhosini, inqwelo moya, ukhuseleko nokubekwa kweliso, kunye nokusebenza kwezamashishini.
Inkqubo ye-ecosystem yomhlaba wonke yezixhobo ezixhunyiwe kwi-HDMI kunye nezisombululo zibandakanya uthungelwano lwaBantu abanamalayisensi e-HDMI, Amaziko ovavanyo agunyazisiweyo, abavelisi bezixhobo zovavanyo abagunyazisiweyo, abavelisi, abathengisi kunye nabafakeli.